एउटा पत्र हराउनेका लागि - Musings by Kamal Kumar
एउटा पत्र हराउनेका लागि
प्रिय हराएको तिमी,
हुन त तिमी हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर लागेको छैन । तै पनि कता कता तिमी हरायौ कि जस्तो लाग्दो रहेछ । हुन सक्छ म पनि कहिँ कतै हराएँ होला । तिमी हराउनु अथवा म हराउनु; हुन सक्छ हामी दुबै हराउनुको ‘महशुस गर्नु पनि त तिमी हुनु र नहुनुको अन्तर महशुस गर्नु नै हो’ भनेर तर्क गर्न सक्छौ तिमी । थाहा छ तिमीलाई, म सँधै विरोधाभाषी छु ।
मैले भनिसकेँ तिमी हराएदेखि, अथवा त्यो पलदेखि जब तिमी हराएको एउटा गाढा महशुस हुन थालेदेखि खासै फरक पाएको छैन मैले म वरिपरिको दुनियाँमा । स्वभाविक र प्राकृतिक परिवर्तनहरु त तिमी हुँदा पनि हुन्छन्, तिमी नहुँदा नि हुन्छन्, हामी दुबै नहुँदा नि हुन्छन् । भइरहन्छन् । तिम्रो आँगन, तिम्रो झ्याल अथवा तिमी रहेको बन्द कोठाको एउटा सानो प्वालबाट पनि तिमी त्यो छिर्केमिर्के संसार देखिरहेकी छ्यौ होला जुन मैले पनि देखेको छु । तिमी हरेक साँझ एउटा रातो सूर्यास्त हेरेर केही बेर टोलाउँछ्यौ होला म पनि टोलाउने गर्दछु । अनि हरेक रङ्गीन विहानीमा तिमीमा पनि सपनाका उन्मुक्त रंग चढ्छ होला ममा जस्तै । फरक यत्ति छ हामी छिर्केमिर्के संसार, रातो सूर्यास्त र रङ्गीन विहानीका प्रतिबिम्ब एक अर्काको आँखामा पनि प्रष्ट देख्दथ्यौं । हेर्दथ्यौं ।
हराउन पनि एक्कासी हराएको हो र । बिस्तारी बिस्तारी धमिलो हुँदा हुँदै देखिनै छाड्यौ पो त । रात विहानीमा हराएजस्तो । दिन साँझमा हराएजस्तो । नढाँटीकन भन्छु त्यो त्यही डाँडा हो । त्यही घाम हो । तर अँह सूर्यास्तमा पहिलेजस्तो ग्ल्यामर पटक्कै छैन । कतै यो सूर्यास्त पनि तिमी हराएजस्तै बिस्तारी बिस्तारी हराउने त हैन कुनै दिन । शहरको पनि के कुरा गर्नु । पहिले कति गाढा र सजिव लाग्द्थ्यो शहरको चित्र । आजकल फिक्का र धमिलो लाग्दैछ । शहरको पनि रङ्ग खुइलिन्छ र ? तिमीलाई थाहा छ भने भनन ।
हुन त मेरा लागि तिमी मात्रै हराएनौ । तिमीसँगै केही गीत हराए । केही संगित हराए । कविता पनि हराए अलिअलि । केही दृश्य हराए । केही मूर्खता हराए । केही सौन्दर्य हराए । सम्झना त हराए अरुको कुरा छाड न ।
यति धेरै थोक हराएर त म रित्तो भएँ जस्तो लागेको होला तिमीलाई । अँह म पूर्ण छु । भरिभराउ छु । अगिनै भनिसकेँ तिमी हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन । हराउनु पनि प्राकृतिक र स्वभाविक कुरा रहेछ भनेर बुझिसकेँ मैले । तिमी हराएकोमा गुनासो त पटक्कै छैन । यहाँबाट हराएर के भयो! अन्त कतै भेटियौ होला । म पनि हराउने क्रममै छु । बिस्तारी बिस्तारी ।
हराउँदै गरेको म
By Kamal Kumar0Comments
Kamal Kumar isaJournalist. Currently he works for Herne Katha.